अमेरिकाको ग्रीनकार्ड त्यागेर नेपालमा ‘फुड चेन’ विकास गर्ने लक्ष्य लिएका युवा व्यवासायीको एउटा फरक कथा:: Artha Dabali
अमेरिकाको ग्रीनकार्ड त्यागेर नेपालमा ‘फुड चेन’ विकास गर्ने लक्ष्य लिएका युवा व्यवासायीको एउटा फरक कथा
सरकारको बजेट कता प्रयोग हुन्छ ? कस्तो योजना बनाउँछ ? आज कर्णालीमा उत्पादित अनाज कुहिएर गएको छ । राज्य आयात गरिरहन्छ यसरी कर्णालीमा सरकार चामल बाँडेर बस्ने होइन ।
राजन तिमल्सिना, डाइरेक्टर, आर के एप्पल प्रोसेसिङ एण्ड हर्टिकल्चर डिस्टीलरी
सम्भावनाको धनी नेपाल
काठमाडौं – नेपालमा अलिकति योजना बनाएर काम गर्नसके जुनसुकै व्यवसायको बजार भविष्य सुन्दर देख्छु । निकै राम्रो छ । विकाशिल मुलुक हुनुका कारण पनि धरै अवसर र सम्भावनाहरु छन् ।
हामीले विदेशिनु पर्ने कारण नै देख्दिन । आफ्नै घर आँगनमा बसेर आफ्नो माटोको उत्पादनलाई आफ्नै परिचय दिन सक्नु नै महान हो भन्ने लाग्छ । म आफैं पनि अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागेर यो व्यवसायमा छु । सामान्य लगानीमा केही वर्षदेखि हामीले हिमालको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने अर्गानिक वस्तु र तिनका फाइदाहरु चिनाउने/बुझाउने प्रयासमै छौं । बजार बढ्दैछ ।
यसले रोजगारको सिर्जना पनि भइरहेको छ भने त्यस क्षेत्रमा खेर गइरहेका बस्तुले मूल्य पनि पाएको छ । जुम्ला/हुम्लाको स्याउबाट बन्ने वाइन, ब्राण्डी, त्यहाँको जडिबुटी, लोकल चामल, सिमीलगायत गेडगुडी, स्याउ तथा विभिन्न अर्गानिक उत्पादन राजधानीलगायत बजारमा उपलब्ध छन् । यसलाई बृहत आकार दिदै चेनमा लैजाने उदेश्य रहेको छ । तर राज्यले भरपुर सहजीकरण गर्न नसकेको मेरो बुझाइ छ ।
बैज्ञानिक अनुसन्धान र अनुगमनको अभाव
नेपालमा वाइन पारखी एकदमै कम छन् । रेड र ह्वाइट दुईवटा मात्रै वाइनको रुपमा परिचय बनाइएको छ तर, यसको प्रकार र किसीमहरु अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । सरकार वाइनको गुणस्तर, मापदण्ड नियन्त्रण/ अनुगमनमा सक्रिय छैन । उत्पादकहरु आफूखुशी उत्पादन गर्दा बजार अस्वस्थ मनोमानी चलिरहेको छ ।
कति अङ्गुर ल्याएर कति वाइन उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ कसैको नियन्त्रणमा छैन । मूल्यको मापदण्ड नहुनु, प्राविधिक विज्ञता नपुग्नु तथा व्यवसायीको मनोमानीले वाइन बजार समस्यामा जान सक्ने संकेत देखिन्छ । त्यस्तै, मलाई लाग्छ प्रत्येक फ्याक्ट्रीसँग उच्च स्तरको ल्याब हुनुपर्छ र ‘रिर्पोट अब्जेक्टिभ’ हुनुपर्छ । सरकारको प्रत्यक्ष निरिक्षणमा हुनुपर्दछ ।
कर्णालीको उत्पादनको पहिचान र सदुपयोग
हामी विदेशका भनेपछि मरिहत्ते गर्दछौं तर, आफ्नै देशको पोषक तत्वहरुलाई चिन्न सक्दैनौं । बुझेका छैनौं । त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ । हुम्ला, जुम्लामा गुणस्तरिय स्याऊ खेर जान्छ तर यता कमसल स्याऊ आयात गरेर जुस तथा वाइन उत्पादन हुन्छ ।
सरकारको बजेट कता प्रयोग हुन्छ त्यहाँको उत्पादन कुहिएको छ यता अर्वैं रुपैयाँ फलफलु खानलाई आयात हुन्छन् । कर्णालीमा उत्पादित ओखर, ब्ल्याक राइस, स्याऊ लगायतका विभिन्न फलफूल तथा अनाजलाई विश्वबजारमा प्रवर्दन गर्न सक्नु पर्दछ त्यो एक किसानले सम्भव छैन राज्यले पूर्णत सहयोग गर्नुपर्छ नकि कर्णालीमा सरकार चामल बाँडेर बस्ने होइन ।
सर्वसाधरणसँगै मिलेर चेन मार्केटको विकास गर्ने लक्ष्य
हाम्रो कम्पनीबाट उत्पादन भएका तथा कर्णालीका किसानले उत्पादन गरेका सामानहरु एउटा बृहत योजनाका साथ लाने सोच छ । अहिले पनि त्यहाँको स्याऊबाट जुस, वाइन, ब्रान्डी, गेडागुडी स्याउलगायतका विभिन्न खाद्य तथा पेय पदार्थहरु उत्पादन गरेर बजारमा ल्याइरहेका छौं । हामी एउटा आर्गानिक फुड चेनको विकास गर्दै छौं । त्यो सर्वसाधरणहरुकै सहभागितमा हुने छ ।
सयौंको रोजगार सिर्जनादेखि कष्टुमरमा विश्वसनियता पनि बढेर जाने हाम्रो विस्वास छ । कम्तिमा राज्यले अपनत्व गर्नुपर्दछ । करिब ५ वर्षदेखि ब्रान्डी उत्पादन गर्दै हाल वाइन उत्पादन गरेका छौं । यसको पनि बजार माग राम्रो छ । किनकी अर्गानिक र हिमालको पानीले बनेको उच्च गुणस्तरको छ ।
काठमाडौं र जुम्लाको दुरी करिव आठ सय किलोमिटर छ । सामान ढुवानी गर्नै समस्या छ । सरकारले वाइन उत्पादनमा सहुलियत प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । बाटो पछिल्लो समय सहज बन्दै गएपनि सरकारले उद्योगको रुपमा यसलाई विकास गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा उद्योग संचालन गर्दा मेशिन आयात, कच्चापदार्थ, ढुवानी, विद्युतलगायत धेरै समस्या छन् ।
जसलाई सहजीकरण गर्न राज्य उदासिन छ । नेपाल र भारत बीच व्यापार घाटा बढिरहेको छ । दुर्गमक्षेत्रमा उत्पादन गरेर निर्यात मात्र गर्न सके पनि धेरै राहत पुग्ने छ । हामीले करिव ५० लाखबाट शुरु गरेको लगानी बढ्दै गएको छ । बजार पनि अघि बढिरहेको छ । देशमै केही गनृ सकिन्छ भन्ने हेतुले अघि बढिरहेका छौं । वार्षिक उत्पादन ५० हजार केस वाइन निकाल्न सक्छौं । त्यस्तै ब्राण्डी पनि । बजार चरम अस्वस्थ बन्दै गएको देखिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा खेर जाने फलफुलको सदुपयोग
हामीले त रिमोट क्षेत्रमा खेर जाने फलफूललाई सदुपयोग गरेका छौं । केमिकल, कलर, तथा सुगर फ्रि र अर्गानिक भएकोले हाम्रो प्रडक्टको माग बढ्दो छ । कतिपय मानिसहरुले अझै पनि अर्गानिक र राम्रो चीज भन्ने बुझेका छैनन् । गुलियो मात्रै हालेर वाइन बजारमा ल्याउने केहि कम्पनीहरुका कारण बजार बिग्रएको अवस्था छ । जापान निर्यात प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको अवस्था छ । अमेरिकालगायत केहि देशबाट पनि माग आइरहेको छ । (कुराकानीमा आधारित)
हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग : ८ दिन बन्द हुँदा साढे तीन करोड घाटा
भाडासम्बन्धी स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न निर्देशन
चार सिमेन्ट उद्योगलाई कारवाही, यस्तो छ कारण